Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Ubhubhane uyitshintshe njani imfundo yokwamkela iindwendwe?
Ubhubhane uchaphazele ishishini ngalinye kwaye ishishini lokwamkela iindwendwe lelona likhawulezileyo ukuphendula kutshintsho olwenzeka kwihlabathi liphela. Umlinganiso wendalo wokuqina kunye nokuziqhelanisa uzibonakalisile kwimeko yobhubhane. Iimpawu eziphambili zokubuk 'iindwendwe ziyavela kwiindawo ezinje ngokusebenza, okukhokelela kwizakhiwo ezixhomileyo, ezingenaxabiso. Kukho ukudityaniswa kwetekhnoloji ngakumbi kwezi brand kwaye ziya zisanda ngokwanda.
UGqr Suborno Bose, uSihlalo kunye noMcebisi oyiNtloko we-IIHM, kwakukudala exoxa ngamathuba emfundo abafundi abanokuphuma kumaziko oqeqesho lokubuka iindwendwe. Namhlanje, ubhubhane unyuse kuphela amathuba abafundi abaphumeleleyo kwiindwendwe kwaye i-IIHM ikhokela ekuqeqesheni abafundi kwaye ibalungiselele ishishini. UGqr Bose ukholelwa kwelokuba umhlaba osemva kobhubhane uza kudala amathuba kwabo banqwenela ushishino kwaye uya kufuna ukuqonda okungakumbi ngemimandla eya ngokuya ibaluleka kwezi ntsuku njengokuhambela phambili kwezobuchwephetsha kwicandelo lokwamkela iindwendwe.
Ihlabathi elisemva kobhubhane liza kudala iindlela ezintsha nezingalindelekanga zabafundi ababuka iindwendwe. Umzi mveliso uza kufuna ukuqonda okungaphezulu kweendawo ezinje ngezisombululo zetekhnoloji, iimodeli zenkonzo ekuchukumiseka kancinci, ulawulo lwentlekele, ucwangciso olusebenzayo lokusebenza kunye nokuxhasa imeko. Ngeemfuno ezinjalo, isidingo sobungcali kwezobugcisa ekubukeni iindwendwe siza kunyuka kuphela. Ke ngoko, imfundo nayo iya kubaxhasa abafundi ngezakhono eziya kubenza basebenze ngakumbi kwaye balungele ikamva, Ukubuk 'iindwendwe njengomsebenzi kuya kuqhubeka nokuba namandla, kufuneke kwaye kunike umdla.
Imfundo yokwamkela iindwendwe ibandakanya uninzi loqeqesho olusebenzayo kunye nokuvezwa kwaye i-IIHM ibonelela ngazo zombini ezi zinto ukuqinisekisa ukukhula kwabafundi ngokubanzi. Ngelixa i-IIHM ibaqeqeshela ukungena kwimakethi yomsebenzi kwimizi-mveliso eyahlukeneyo, ikwakhuthaza ukuba baqale amashishini abo kuyo nayiphi na indawo enomdla kubo. Ikwanayo neseli ekhethekileyo yophuhliso lwabashishini ebizwa ngokuba yiSAHAS. Esi sisiseko sengxowa mali apho abafundi abakhuthazeke ngokwenyani ukuqala ishishini labo banokwabelwa imali eyinkunzi. Kuya kufuneka bangenise imodeli yeshishini esebenzayo nenokufikeleleka ukuze babenakho ukufumana izibonelelo zeSAHAS.
Le meko yesifo ishiye ulutsha oluninzi luzibuza ukuba luzakwenza ntoni ngemisebenzi yalo. Nangona kunjalo, abafundi abaninzi be-IIHM baqala amashishini abo ngexesha lokutshixwa kwesifo seCovid-19 kwaye basaqhuba ngempumelelo kumashishini abo. I-IIHM ibonelela ngendawo efanelekileyo kunye nenkxaso apho abafundi baziva bephefumlelwe kwaye bezithembile ukuguqula amaphupha abo kunye nemibono ibe yinyani.
I-IIHM idale ingxowa-mali yecorpus ngelinge elibizwa ngokuba yiSAHAS. Umbono kukukhuthaza abafundi ukuba baqale amashishini abo kwaye i-IIHM iyakuxhasa umbono wabo ngeSAHAS. Eli nyathelo lakhuthaza abafundi abaninzi ukuba benze izinto ezintsha ngexesha lokutshixa kwaye baqale ngokwabo ukuqala.
Ezona zakhono zinqwenelekayo kwintengiso yanamhlanje zizakhono ezithambileyo. Uninzi lopapasho lophando kunye nabacingeli baqikelele ukuba ilizwe lasemva kobhubhane ngokuqinisekileyo liya kugxininisa ngakumbi kwizakhono ezithambileyo. Oku kuthetha ukuphuculwa kwezakhono zabantu okubaluleke kakhulu kwishishini lokubuka iindwendwe ngokunjalo.
IIHM inceda abafundi baqonde kwaye baqonde amandla ezakhono ezithambileyo. Njengokuba aba bafundi besenza ikhondo lomsebenzi wabo, ezi zakhono zithambileyo ziya kuba yinto ephambili yokumisela ikamva labo kwaye zibenze bomelele kwaye bakwazi ukuziqhelanisa, baphuhlise amandla okutshintsha iingqondo, ukulwa nokungaqiniseki kunye nokuseka ukuthembana. Ezi mpawu ziya kubanceda kokubini kwixesha elifutshane kunye nelide njengoko bejonga amathuba amatsha kunye neendlela kwiLizwe loBhubhane.
Kuwo wonke lo bhubhani, i-IIHM izamile ukukhuthaza abafundi, ubuhlakani kunye nabasebenzi. Ukugcina unxibelelwano olusondeleyo rhoqo nabafundi ukuze baqonde iimfuno zabo kunye nemiceli mngeni iyabanceda ukuba bahlale benxibelelene nemfundo kunye nemisebenzi yekampus ngokusebenzisa i-intanethi. Kunyaka ophelileyo, umbhiyozo weekholeji owawusenziwa yi-IIHM, eRigolo, wawubanjelwe kwiqonga le-Intanethi apho abafundi babekhuthazwa ukuba bathathe inxaxheba babonise italente yabo.
Xa i-wave yokuqala yafika ngo-2020 kwaye isizwe sonke sangena kwi-lockdown, i-IIHM yayiyinye yamaziko okuqala athatha isigqibo sokuqhubeka nenkqubo yemfundo ngokusebenzisa i-intanethi. Kuba sasinetekhnoloji yethu endaweni, singaqala kwangoko iiklasi. Nangona kunjalo uGqirha Bose wakhankanya ukuba i-IIHM inemvelaphi yeeklasi ezinqabileyo njengoko uninzi lwabapheki bamanye amazwe kunye neengcali zokubuka iindwendwe bezisoloko zisebenzisa iiklasi ze-Intanethi ngaphambili. Ke eli lelinye ithuba lokuphonononga iindlela zokufunda zobudala obutsha.
Ukuqonda gwenxa ukuba ukubuk 'iindwendwe kunxulumene kuphela neehotele kuyacaciswa kwaye yile ndlela i-IIHM iqhuba ngayo imfundo yayo. Kukho umhlaba wamathuba alinde abafundi abamkela iindwendwe kwaye i-IIHM ihlala ikhuthaza abafundi ukuba baphonononge ngakumbi amashishini kunye namathuba oshishino ngokunjalo. Abafundi bokungenisa izihambi bayafunwa kumashishini ahlukeneyo anjengohambo, ulawulo lomnyhadala, ukubhankisha, ukhathalelo lwempilo, indawo yokuthengisa izindlu nomhlaba ephezulu, ukuthengisa izinto ezinqabileyo, ukuhamba ngenqwelomoya, ukuhamba ngenqanawa kunye nabanye abaninzi. Le misebenzi ibandakanya ukwahluka kwemisebenzi kwaye ivumela izinto ezintsha kunye nonxibelelwano lomntu. Abafundi beenkcubeko, nabo bafundiswa amashishini kunye nobuchule beshishini obubaxhobisa ngeziseko ezenza ukuba zilungele amashishini angomso.
Umbono we-IIHM kukuthatha imfundo yokubuka iindwendwe kwinqanaba eliya kuthi lilungiselele abafundi banamhlanje amashishini kunye namashishini angomso. Ukukhokela utshintsho kunye nokulungiselela abafundi bayo yesiqhelo esitsha esitshintshe umhlaba ngonaphakade kule minyaka mibini idlulileyo. Ukuphonononga amathuba emfundo yokubuk 'iindwendwe yiyo loo nto inkqubo yobudlelwane ye-FIIHM ibandakanya bonke oosomashishini kunye neengcali eziya kuthi zicebise kwaye zabelane ngamava abo kumzi-mveliso nabafundi. Iziko lophando kwezokhenketho elisisidingo seyure nalo licwangcisiwe ukuze imfundo yokwamkela iindwendwe idityaniswe ngokungagungqiyo kunye nezifundo zokhenketho.
U-DR Suborno Bose u-CEO we-IIHM Hotel School ukhokela iziko ngaphambili lijolise kwaye lihlengahlengisa imfundo yesiqhelo esitsha ekwayimfuno yeyure.
The Best Producer of Bathroom Ware Novemba 30, 2021